Moments leh saaxiibo 29
Gudcurka ayaa ah maqnaanshaha iftiinka, mise waa shey gooni u ah naftiisa oo qaata meeshii nalka. Hadday kala soocaan yihiin oo kala fog yihiin, muxuu yahay gudcurku iyo iftiinku?
Gudcurka maahan "maqnaanshaha iftiinka." Iftiimintu ma aha mugdi. Madowgu waa shey laftiisa, oo aan khafiif ahayn. Gudcurka waxaa laga yaabaa inuu in mudo ah qaato meeshii iftiinka iyo iftiinka aan qarsooneyn, laakiin iftiinka wuxuu baabi'in doonaa gudcurka. Iftiinka ayaa ugu dambeyntii kaga gudbi doona gudcurka iyadoo kor loo qaadayo oo keenaya gudcurka inuu iftiin noqdo. Iftiinka iyo gudcurka aan ku garanay dareenka iftiinka ma ahan iftiin iyo mugdi naftooda, in kastoo aan u aragno inay yihiin iftiin iyo gudcur inay asalkoodu ka soo jeedaan iftiinka runta ah iyo gudcurka. Sida shay, gudcurka waa walax isku-dhafan, taas oo ah asalka, gundhigga ama asalka muujinta dhammaan arrimaha muhiimka ah. Xaaladdeedii hore, way xasilloon tahay waana isku mid iyada lafteeda. Waa miyir-beel, miyir-la’aan iyo miyir-beelid. Iftiimintu waa awooda ka timaada caqliga ee soo maray isbadalka isla markaana ka sarreeya muujinta. Markii caqliyadu toosiyaan awoodooda iftiinka shay aan shuruud lahayn iyo isku mid ah, oo ah mugdi, qaybta walaxda ama gudcurka, oo iftiinka loo jiheeyo, ayaa ku soo baxa waxqabadka. Bilowga nashaadaadka, sheyga wuxuu mid noqdey labo-labo. Gudcurka gudcurka ama walaxda ma aha walax, laakiin waa laba. Labadan waxyaalood ee mugdiga ama mugdiga ah waxaa loo yaqaanaa arrin jinni ah. Ruuxa iyo shaygu waa labada waxyaalood ee iska soo horjeedda oo ah shay, kaas oo ah walxo asal ahaan ka soo jeeda, laakiin ku lug leh arrimaha. Cutubyada walxaha walaxda loo qaybiyay ay ka mid yihiin arrimaha-ruux ahaaneed, iyo sidoo kale muujinta maaddada-guud ahaan, ayaa soo jiidatay iyaga iyo asal ahaan waalidkood asal ahaan iyo sidoo kale sababta ficilkooda ama muuqaalkooda. Maandooriyaha ayaa ah xididka iyo waalidka qayb walboo aan la arki karin oo ka mid ah tiro ifafaaleedka iyo sidoo kale tirade guud ahaanba. Iftiimintu waa sababta keentay muujinta iyo ficilka qayb kasta iyo sidoo kale tirada guud ee muujinta guud ahaan. Markaa qayb kasta oo aan la arki karin, iyo sidoo kale guud ahaan muujinta guud ahaan waxaa lagu matalaa: waalidka asalka u ah walaxda iyo awooda ku-shaqeynta sida iftiinka. Unug kasta oo loo yaqaanno shey-ruuxa waxa ku jira waalidka, walaxda, iyo awoodda, iftiinka. Maandooriyaha waxaa matalaya qaybtaas unugyada aan la arki karin taasoo loo yaqaanno arrinta, iyo nalka waxaa matalaya dhinaca kale ama qeybta unugyada aan la arki karin oo loo yaqaan 'spirit'. Caalamka oo dhan ama muuqaalada waxaa loogu yeeraa walxaha aan duugoobin ama gudcurka oo lagu muujiyo iftiinka awoodda iftiinka, iyo iftiinkaan wuxuu ilaaliyaa sheyga-sidaas darteed waxaa loogu yeeraa si isdaba joog ah ficil ahaan muddadiisa oo dhan. Inta lagu jiro mudada muujinta iftiinka ee hada muuqda gudcurka ayaa ah waxa keena waxaan u naqaanno iftiin. Arrinta caddaynaysa ayaa ah waxa aan u naqaanno gudcurka. Iftiinka iyo gudcurka ayaa umuuqda kuwo marwalba khilaaf jira hadana waxay umuuqdaan inay iscaawinayaan midba midka kale inta ay muuqato. Maalin iyo habeenba, hurdada iyo hurdada, nolosha iyo geeriba, waa iska soo horjeedda ama dhinacyada gadaal u eg ee waxa la mid ah. Kuwa kasoo horjeedaa waxay u dhaqmaan si isdaba joog ah muddo gaaban ama waqti dheer, ilaa mugdiga loo beddelo iftiin. Midba midka kale wuxuu u muuqdaa midka kale mid aan loo baahnayn in kastoo midba midka kale uu yahay mid daruuri u ah. Dadku wuxuu ku jiraa gudcurka iyo iftiinka iftiinka. Dadka dareenkiisu waa gudcurka maskaxdiisu waa nuurkiisa. Laakiin tani badanaa looma tixgaliyo. Dareenka maskaxdu waxay u muuqataa sidii gudcur. Maskaxda maskaxdu waa mugdi. Wixii caqliga dareenkiisu u muuqdo inuu ka soo baxayo qorraxda, waxaan ugu yeernaa iftiinka qorraxda. Maskaxda dareenka iyo waxa ay ugu yeedhaan iftiinka waa sidii mugdi oo kale markay tahay, maskaxda ayaa lagu iftiimiyaa awoodda iftiinka ee garaadka waalidkeeda. Qorraxda qorraxda iyo fahamka caqligu wuu inoo imaan karaa iyadoo maskaxdu ay ku dhex jirto iskudhafka gudcurka; ka dib waxaan arki doonnaa iftiinka qoraxda oo u ifinaya ama astaan ​​u ah iftiinka dhabta ah. Gudcurka ayaa meel loo siiyaa oo loo beddelaa iftiin joogto ah maadaama lagu guuleysto aragtida iyo ficillada maskaxda. Markay maskaxdeena ku guuleysato isku dhaca gudcurka waxaan arki doonnaa iftiinka runta ah ee gudcurka ku dhex iftiimaya inkasta oo gudcurka uusan hadda ogayn.
Waa maxay radium iyo sidee suurtogal u ah in ay si joogto ah u soo saarto tamar weyn iyada oo aan wax qashin ah iyo khasaaro awoodeeda iyo jidhkiisa, iyo maxay ilaha wacyigalinta weyn ee radiyaha?
Waxaa loo maleynayaa in qoraaga su'aashu ay la socdaan hadalada sayniska ah ee kusaabsan daahfurka radium, sida laga soosaaray madasha Madame Curie, awoodeeda iftiinkeeda, saameynta ay ku dhaqaaqdo jirka kale, yaraanta iyo caqabadaha ka haysta soo-saaristiisa.
Dayax gacmeedku waa xaalad jidh ahaaneed oo waxsoosaar taas oo xoog iyo shay ka fiican kan jirka lagu muujiyo dareenka. Radium waa arrin jir ahaaneed oo la xiriirta arrimo kale iyo xoogagga sida caadiga ah lagu tuhunsan yahay inay yihiin khiyaamo. Ether iyo ciidamadan waa wadamo aad uga wanaagsan kan jirka waxayna ku dhaqmaan ama u maraan waxa loo yaqaan sheyga jirka, ha ahaato sheyga jirku waa dheeman ama molikroolka hydrogen. Haddii aysan ahaan lahayn arrimo la xiriira isir ahaan ama khiyaali ah oo lagu maareynayo arrimaha jir ahaaneed ma jiri doono isbeddel ama cilad xagga arrimaha jirka ah. Ficilka finer ee loo maro arrimaha guud wuxuu sababayaa iskudarka "kiimikada" iyo isbeddelada arrinta isticmaalka caadiga ah iyo sida ay ula macaamilaan kimistariga.
Dayax gacmeedku waa arin jireed oo si toos ah loogu maareeyo ama loo maro arrinta astral-ka iyada oo aan loo eegin qodobka seddexaad iyada oo aan si muuqata loo beddelin ficilka arrinta astral. Waxyaabaha kale ee jireed ayaa lagu xalliyaa arrimaha astral, laakiin heer ka hooseeya radium. Guud ahaan, natiijooyinka falgalka astralka ee arrimaha kale ee jirka ma aha wax la fahmi karo sababtoo ah maaddada jirka ahi ma bixin karto xiriirka iyo iska caabbinta arrinta astral-ka ee ay bixiso radium, iyo arrimaha kale badankood si toos ah ugama xiriiraan arrimaha astral-ka sida oo kale. radium. Walxaha aan dhamaadka lahayn iyo kuwa aan goyn karin ee radium-ka ayaa ku jira dhammaan arrinta. Laakiin ilaa iyo hadda muuqaalka muuqda ayaa u muuqda inuu yahay isha laga soo qaadi karo inta ugu badan, inkasta oo ay tahay. Marka walxaha loo yaqaan 'radium' ay isku dhafan yihiin hal cuf, arrimaha astral-ka tooska ayey u shaqeeyaan iyaga oo adeegsanaya tayo iyo awood muuqata oo dareenka ah.
Waxqabadka radium-ka radium ma ahan, sida hadda la moodayo, sababtuna tahay abuurkeeda ama iska tuurida walxaha jirkeeda ka mid ah. Arrinta jirka ee radium ka kooban yahay ma bixineyso howlaha-raadiyaha ama awooda kale ee ka muuqata. Radium ma ahan xoog, laakiin waa xoog dhexdhexaad ah. Diyaaraduhu waa arin laba jibaaran waxayna ku jiraan diyaarado kaladuwan. Diyaarad kasta waxay kujirtaa goorta ay tahay wax aan jirin iyo xoog marka ay firfircoon tahay. dayuuraddu waa shey firfircoon oo astral ah.) Radium ayaa ah jirka ay ka muuqato arrimaha astral. Dayax gacmeedka ayaa ah arrinta adduunka; Raadiyaha-firfircoonaanku waa shey ka soo ifbaxda dunida astral kaas oo lagu arki karo iyadoo loo marayo shucaaca jirka. Dunida astral-ka ah waxay ku wareegsan tahay ama ku wareegaan dunida jireed, iyo, maadama ay qaddiyaddiisu fiican tahay, waxay ku dhex jirtaa oo ka dhex waddaa guud ahaan jidhka, sida saynisku sheegayso in cirka isku shareerayo ama dhex maro, ama sida la og yahay inay korantadu u shaqayso iyo biyaha. Sida shumac iftiin bixinaya, radium-ka iftiinka ama tamarta. Laakiin si ka duwan shumaca, looma gubo bixinta nalalka. Sida koronto-dhaliye ama silig koronto oo umuuqda inuu dhalinayo kuleyl ama iftiin ama awood, radium wuxuu umuuqdaa inuu soo saaro ama tuuro tamar; oo sidaasay yeelaysaa, laga yaabee. Laakiin nalka ama awooda kale ee umuuqata inay soo saarey maahan silig. Waxaa la ogyahay in awooda korantadu aysan asal ahaan kasoo jeedin dynamo ama silig koronto. Waxaa sidoo kale la ogyahay in korantada u soo bandhigta sida kuleylka ama iftiinka ama awooda waxaa loo jeediyaa dhinaca fiilada. Si la mid ah, tayadaas ama xoogga loo yaqaan waxqabadka-raadiyaha ayaa ku muujinaya radium-ka isha hadda aan sayniska aqoon. Laakiin isha laga helo radium ma aha wax ka badan isha isha korantadu waa dheecaan ama silig. Walxaha jirkiisa ah waa la tuuraa ama la gubaayaa ama loo isticmaalaa heer ka hooseeya qulqulka dynamo ama silig koronto iyadoo ay jirto tillaabada korantada. Isha isha taas oo lagu muujiyo radium waxay lamid tahay isha isha ifka ee korantada. Labaduba waxay ka yimaadeen isla isha. Farqiga u dhexeeya muujinta korantada sida kuleylka, iftiinka ama awooda iyo waxa lagu muujiyo shucaaca jirka wuxuu ku dhexjiraa muujinta mana ahan koronto ama howlaha-raadiyaha. Walxaha ay ka kooban tahay 'dynamo', matoor koronto ama silig, ayaan la mid ahayn tayada ay leeyihiin walxaha ay radium ka samaysan tahay. Waxyaabaha Astral iyo xoogagga ku shaqeeya arrimaha astral waxay si toos ah ugu shaqeeyaan radium iyada oo aan la haynin sabab kale ama dhexdhexaadin. Haatan ku shaqeeya fiilada korantada waxaa lagu muujiyaa arrimo kale, sida baytariyada, birlabbo, matoorro, dynamos, uumi iyo shidaal. Waxyaabahan midkoodna looma baahna radium sababta oo ah waxay si toos ah ula xiriirtaa iyada lafteedu waxay u oggolaaneysaa arrinta astral-ka inay ka soo baxaan ama ka soo baxaan, radium-ka.
Waxaa la ogyahay in korantada hada jirta aysan dhex marin fiilada, laakiin hareeraha xarigga. Waxa kale oo la ogaan doonaa in si la mid ah hawluhu hawluhu aysan u aheyn radium, laakiin hareeraha ama ku saabsan radium-ka. Koronto yaqaanku waxay isku dayeen oo ay wali isku dayayaan inay wax ka bartaan qaab tamar koronto looga dhigi karo si loo muujiyo oo loo hago iyada oo aan la isticmaalin uumi ama shidaal ama ficil galvanic. Radium ayaa soo jeedinaysa oo muujineysa sida tan wax loo qaban karo.